Maamul laga unkayo Jubooyinka & Gedo
4 Jul 4, 2012 - 9:17:22 AM
Dowladda Puntland ayaa maanta 4 July,2012 ayaa soo dhaweysey dhismaha maamul goboleed gobollada Gedo iyo Jubooyinka oo qayb ka noqda DF Somalia.
War ka soo baxay madaxtoyada Puntland ayaa lagu sheegey ka dib shirkii wadatashiga Nairobi ka dhacey dhamaadkii June2012 islamarkaasina ka soo qaybgaleen dhinacyo siyaasadeed oo ka soo jeeda gobollada Gedo iyo Jubooyinka koonfurta Somalia ay Puntland soo dhaweyneyso unkida maamul goboleed hoostaga Dowladda Federaalka Somalia.
‘’Puntland waxay aqoonsantahay go’aanadii ka soo baxay shirkii Nairobi 28-30 June ,2012 oo ku baaqey in la sameeyo gudi farsamo oo shira 9 July ,2012 si ay u diyaariyaan qorshe hawleed si guud lagu heshiiyo islamarkaasina albaabka u fuaraya dhamaanka dhinacyada siyaasada iyo maamulada hoose inay ka qayb qaataan hanaanka siyaasadeed sidii looga dhisi lahaa maamul KMg-ah gobollada Jubooyinka Somalia’’ ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Puntland.
Dowladda Puntland ee Soomaliyeed waxay ugu yeertey dhamaan dhinacyada siyaasada ku firfircoon iyo ururada bulshada rayidka ah ee ka soo jeeda gobollada Jubooyinka inay ku midoobaan danta ka dhaxeysa ee ah inay sameystaan maamul goboleed sida uu qeexayo qabyo qoraalka dastuurka Somalia.
Puntland sidoo kale waxay ugu baaqdey siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka ah ee ku dhaqan gobollada dhexe iyo koonfurta dalka inay guda galaan dhismaha maamul goboleedyo sida uu dastuurku dhigayo.
Olole tacadiga oo la xirey Garowe